IRHASI VS ELECTRIC COOKTOP (ISIKHOKELO SOMBANE) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Irhasi vs Electric Cooktop (Isikhokelo soMbane)
Irhasi vs Electric Cooktop (Isikhokelo soMbane)
Nasi isikhokelo sethu kwiiyantlukwano zerhasi kunye nendawo yokupheka yombane kubandakanya ulawulo lobushushu, ukupheka, iindleko, indawo yokubala kunye nolondolozo. Ukupheka kunokulindeleka ukuba kuhlale iminyaka eli-13 ukuya kweli-15. Ayisiyiyo kuphela ukukhetha phakathi kwegesi kunye nombane enkulu, kuya kufuneka uphile neziphumo zesigqibo sakho ixesha elide.
Ngokuqonda okucacileyo ngomahluko, izibonelelo kunye neziphene ezahlukeneyo iintlobo zokupheka , unokwenza ukhetho olunolwazi oluya kukhonza ikhaya lakho kwiminyaka ezayo.
Yintoni iCooktop yeGesi
Yintoni iCooktop yombane
Igesi vs Electric Electric Ukupheka Ubushushu
Ukupheka kwegesi vs Electric Electric Cooktop
Iindleko zokubaleka zokupheka
Yeyiphi eyona Gesi ilungileyo ngokuchasene nokuPheka kombane
Isitovu segesi sisebenzisa igesi enokutsha, efana nepropane okanye igesi yendalo, ukufudumeza okuphakathi kweembiza neepani ozibekayo kwisitshisi.
Amalangatye avela kwangoko xa isibane sikhanyisiwe. Ukucofa kwicala lestovetop kusetyenziselwa ukuvula nokuvala ivelufa yegesi, ukulawula ukuphakama kunye nokuqina kwelangatye.
Ukufaka isitovu serhasi ayisiyo projekthi ye-DIY. Nokuba yeyiphi na irhasi oyisebenzisayo ukubasa isitovu sakho, umntu olungisa imibhobho yamanzi okanye umntu onelayisensi yokusebenza ngerhasi kufuneka asebenzise imigca kwaye aqhagamshele isixhobo.
Izitovu zerhasi yendalo zinokufakwa kuphela kwiipropathi eziqhagamshelwe kumthengisi ngemigca yegesi engaphantsi komhlaba. Izitovu ezihamba kwipropane zinokudityaniswa kwitanki egcinwe ngaphandle kwekhaya.
Umbhobho wokupheka wombane ubasa into ethile esebenzisa umbane kwaye ugqithisela ubushushu obuvelisiweyo epanini okanye embizeni ngaphezulu.
Isitovu sokupheka sisebenza ngombane okhethekileyo oyi-220-volt ekufuneka ufakwe ngumbane. Uninzi lweevenkile zokupheka zimalunga nama-30 ″ okanye ama-36 ububanzi. Unokufunda ngakumbi ngokwahlukileyo ubungakanani besitovu Apha.
Zintathu iintlobo zezitshisi eziwela phantsi kwesambulela sezitovu zombane.
Iikhoyili zokupheka zinesitshisi esihleli kwindawo evulekileyo okanye ngaphezulu komphezulu wokupheka. Olu hlobo ludla ngokuba nepani yokuvuza phantsi kwezitshisi ukubamba nakuphi na ukuchitheka okanye amasuntswana okutya anokubenza ukuba bathathe ixesha elininzi lokucoca.
Izitshisi zeCeramic-zombane (zikwabizwa ngokuba ziiglasi zokupheka okanye amagqabi agudileyo) zifihla iikhoyili zokufudumeza zesinyithi zemveli phantsi komaleko weglasi yodongwe enobushushu. Kulula ukuzicoca.
I-induction-burners burners zikwabeka nocingo lweglasi yodongwe, kodwa ikhoyili yentsimbi engezantsi yenziwe ngobhedu.
Xa ipani enesinyithi semagnethi okanye intsimbi ibekwe kwisitshisi kwaye umbane uvuliwe, iqhutywa ngokuthe ngqo ukusuka kwisitshisi ukuya epanini, ukukhawulezisa ubushushu kunye nenkqubo yokupheka.
Iindawo zokupheka zegesi ngoomatshini bokuchaneka, bephendula kwangoko kuhlengahlengiso lwezivalo. Oku kuguqulela kulawulo ngakumbi kubushushu ngelixa upheka.
Abapheki abaziingcali bathanda iivenkile zokupheka zerhasi ngokuhlwa abasasaza ngazo ubushushu ejikeleze ipani, kunye nokukwazi kwabo ukubiza kwangoko okanye ukugxotha ubushushu.
Iindawo zokupheka zombane zinexesha elide lokuzifudumeza kunezitovu zerhasi, kuba ikhoyili ifuna ixesha lokuzifudumeza ngaphambi kokuba iqale ukutshintshela ubushushu epanini. Bayabambelela kubushushu emva kokuba isibane sicinyiwe.
Izimvo zokukhumbula iminyaka emi-2 kuye
Ukuze umise inkqubo yokupheka kwisitovu sombane, kufuneka ususe ipani kwisitovu. Izitofu zombane aziphenduli kangako kulungelelwaniso lobushushu ngexesha lokupheka.
Ukubiza kwangoko ubushushu obuphezulu kwisitovu segesi, vele ucofe umlilo kwaye uvule ivalve yegesi kuyo yonke indlela. I-pan iya kutshisa ishushu ngaphakathi komzuzu okanye njalo.
Kwisitovu sombane, inkqubo ithatha ixesha elide kakhulu. Kwaye, ukuba uyaqonda ukuba ubushushu buphezulu kakhulu, kuya kufuneka uyisuse ipani kwisitshisi ngelixa ulinde i-coil yombane ukuba iphendule.
Ngelixa upheka ngobushushu obuphantsi, amadangatye esitshisi segesi amancinci kakhulu. Umoya opholileyo ekhitshini lakho unokuwucima ngokulula umlilo, umise kwangoko inkqubo yokupheka.
Logama ivalve ivuliwe, irhasi iya kuqhubeka nokukhululwa. Faka umoya kwindawo leyo ngaphambi kokuphinda ubethe umlilo.
Ubushushu besitshisi sombane sizinzile kwaye sizinzile, kwaye asizukuphuma. Nje ukuba ubushushu obufunwayo bufikelelwe, abuyi kuguquka, ukwenza izitovu zombane zilungele iinkqubo zokupheka ezinde, ezicothayo ezenziwa kubushushu obuphantsi.
Nokuba unosapho ekufuneka ulondle okanye uyalupheka, ukutya okuninzi kufuna isitovu okanye i-oveni. Ngexesha lokucima kombane, ngekhe ukwazi ukusebenzisa isitovu sombane.
Isitovu segesi esime ngakwelinye icala, asifuni mbane ukuba sisebenze. Unokufuna ukukhetha isitovu segesi ngesibane somqhubi omiyo ukuba uhlala kwindawo apho umbane uqhelekile.
I-oveni yegesi ishushu ngaphezulu kunasezantsi, kuba akukho fan yokujikeleza umoya. . Ngelixa abapheki abanamava banokusebenzisa le meko ye-temp-multi, kunokuba ngumceli mngeni okanye kuphazamise ii-novices.
I-oveni zombane ziyaziwa ngokuhambisa ubushushu ngokulinganayo macala onke kumngxunya we-oveni, nto leyo eyenza kube lula ukufikelela kwiziphumo. Ukuba wenza ibhaka enkulu enkulu, i-oveni yombane ngokuqinisekileyo lolona khetho lufanelekileyo.
Ukuqunjelwa sisixhobo sokupheka apho ukutya kufudunyezwa ngokuthe ngqo phezulu. Oku kuthelekiswa nokosa, apho ukutya kufudunyezwa ukusuka ezantsi.
Kwi-oveni yegesi, umphezulu wesitshixo se-oveni ugqunywe ngokukhawuleza ngamadangatye, ukubonelela ngobushushu kwangoko kuyo nayiphi na into ebekwe ngaphantsi kwazo.
I-broiler ye-oveni yombane ithatha ixesha elide ukufudumeza, kwaye ukutya kufuneka kusondele kakhulu kwisixhobo sobushushu ukuze kubiliswe ngokufanelekileyo.
Izitovu zegesi zisebenzisa isibane somqhubi wenqwelomoya - ilangatye elincinci, elizinzileyo - ukutshisa izitovu. Iimodeli zokukhanya komqhubi omiyo zisebenzisa amandla ngakumbi, njengoko zihlala zisondla isixa esincinci segesi kwisibane somqhubi, sizigcine zikhanya.
Iimodeli zombane zombane zisebenzisa umbane ukukhanyisa isibane somqhubi, esisetyenziselwa ukutshisa isitofu. Izitovu zokukhanya ezimileyo ezinokusetyenziswa zinokusetyenziswa ngexesha lokucima kombane, ngelixa isitovu sombane esingenako.
Zonke iioveni ezakhiwe ukusukela ngo-1990 zinezinto ezithunyelwe ngombane endaweni yokuma kwezibane zokuqhuba, ngenxa yezizathu zokhuseleko.
Ukuvavanya iindleko zokubaleka, kubalulekile ukuba uqwalasele ukuba zingaphi iiyunithi zamandla ezisetyenziswa yivenkile yokupheka, kwaye iyunithi nganye ixabisa malini.
Imveliso yamandla esitovu sombane ilinganiswa ngee-kilowatts. Inkampani yombane ibala iindleko zayo ngokusekwe kwiiyure zeekhilowathi. Ixabiso eliphakathi lombane e-US ziisenti ezili-12 nge kilowatt iyure nganye.
Isitovu sombane / isitovu se-oveni sitsala umndilili weewatthi ezingama-3 000 ngelixa zisetyenziswa, eziguqulela kwii-kilowatts ezi-3. Ukuba usebenzisa esi sixhobo umndilili weeyure ezi-5 ngeveki, iindleko zakho zenyanga nganye zokupheka umpheki wombane zingangama- $ 7.20.
Ukusetyenziswa kwegesi kulinganiswa kwi-therms, kunye ne-therm eyodwa ebiza i- $ 0.95 ngokwe-avareji. Uninzi lwabapheki begesi bachitha i-0.7 therms ngeyure ngelixa lisetyenziswa. Ngeeyure ezi-5 ngeveki iiyure ezingama-20 zokusetyenziswa ngenyanga, iindleko zizonke zokuqhuba isitovu segesi ziye kwi $ 13.30.
Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba iivenkile zokupheka zombane zisebenza ngakumbi kwaye zidlulisela i-74% yamandla avelisiweyo kukutya okuphekiweyo. Kwelinye icala iivenkile zokupheka zegesi zichitha amandla amaninzi kwaye zigqithisela kuphela i-40% yamandla kukutya okuphekiweyo.
Xa ingasetyenziswanga, umpheki ophekiweyo unokunyangwa njengecandelo elongezelelweyo le-countertop. Abapheki begesi, abaneepani zokuxhasa, izitovu, kunye neziciko zokukhuphela, azinakusetyenziswa ngale ndlela.
Ukuba unekhitshi elincinci okanye indawo yokulinganisa encinci, umpheki wombane unokukhetha okungcono.
Iglasi yodongwe enobushushu esetyenziselwa isitofu sombane kulula ukuyigcina icocekile. Yisule ngokulula xa umhlaba wokupheka ubuyile kubushushu begumbi. Akukho zixhobo zixhobo zokucoca macala onke ngaphandle kweedayala zokupheka.
Ezinye iimodeli zisusa la maqhina endaweni yolawulo olusebenzayo, ezenza ukuba kube lula ukuzicoca. I-induction-burner burners nazo zilula ukuzicoca.
Ngesitovu segesi, kuya kufuneka ususe izixhasi zepani kunye nezikhuselo zesitshisi ukuze ucoce ngokucokisekileyo ipheki. Akukho khetho kulawulo lokuchukumisa, ke kuyakufuneka ukuba ucoce amaqhosha evalve yegesi ngokunjalo.
Umgangatho wokugcina ngasese
Nangona kunjalo, izitovu zerhasi ziphola ngokukhawuleza okukhulu kunezitovu zombane. Ungagqiba ukupheka kwaye usule ngokukhawuleza nakuphi na ukuchitheka okanye ukutshiza ngaphambi kokuba kubhakwe kumphezulu wesitovu. Izitovu zegesi zihlala zenziwe ngentsimbi engenasici, efuna isicoci esifanelekileyo.
Isitshisi esivaliweyo sombane wokupheka siphume ngesitayile, kodwa ngamanye amaxesha sisetyenziselwa izitovu ezincinci kwikhabhathi okanye isithuthi sokuzonwabisa. Ikhoyili kunzima ukuyisusa kwaye igcina ubushushu ixesha elide, isenza kube nzima ukuyicoca.
Yeyiphi eyona Gesi ilungileyo kunye noMbane wokuPheka
Ngaphambi kokuba ubeke intliziyo yakho kwindawo yokupheka igesi, khangela ukuba ipropati yakho ixhunyiwe kwiirhasi. Ukuba akunjalo, kuya kufuneka uhlawule ukuze uzifakele, ufake i-propane tank hookup, okanye ukhethe imodeli yombane endaweni yoko.
Ukufaka isitovu sombane kudla ngokwenziwa ngexesha lokuqala, kodwa kungongezwa ngumbane ngalo naliphi na ixesha.
Abanye babanini bamakhaya baziva benoloyiko malunga nokuhambisa igesi kumakhaya abo. Iintsapho ezinabantwana abancinci zinokuphikisa kwindawo evulekileyo yelangatye ekhayeni.
Ukupheka ii-aficionados kunye nabapheki banokulangazelela ukwenziwa kunye nolawulo olunikezelwa zizitshisi zerhasi. Kungenxa yokuba izitshisi zerhasi zishushu ngokukhawuleza kunezibane zombane. Ukongeza ilangatye isitya sokupheka segesi sivelisa ubushushu ngeendlela ezahlukeneyo zokupheka.
Isitofu esona silungileyo kuwe sesona sihambelana neemfuno zakho kunye nemeko yokuhlala. Zombini igesi kunye zombane zokupheka zizinto ezinokukhethwa ngokufanelekileyo.
Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga kwinqaku lethu malunga Uyilo lwabapheki ekhitshini .
UPatrick Dempsey kunye noMfazi wakhe uJill babuyela kwindawo yabo yomtshato kwisikhumbuzo sabo
USerena Williams Ekugqibeleni wangcamla ikhekhe lakhe lomtshato-kwiinyanga ezintlanu emva kokutshata noAlexis Ohanian
UBlake Onomdla kunye noRyan Reynolds Buyela kwindawo yokutyela apho bawela khona eluthandweni ngomhla wokuzalwa kwakhe wama-40
Iindidi ezahlukeneyo zeBhedi (Imifanekiso yeZitayile zesakhelo seBhedi)
Amahlaya ka-Liam Hemsworth Wayecinga ukuba i-Miley Cyrus's Engagement Ring yayiyi-CGI
ULea Michele Uyabandakanyeka: Zonke iinkcukacha malunga neRandi yakhe entle
Ngaba ikhekhe lomtshato eliSwilayo ebusweni beqabane lakho yinto ekufanele uyenze?
Ikhethekileyo: UMcwangcisi weCMT's 'Bachelorette Party' wabelana ngeeNgcebiso zaKhe ngeempelaveki eNempumelelo, engenaDrama
Ikhekhe lomtshato i-Amethyst Geode yiColorado Cake Designer iya kwintsholongwane
I-Ring yokuzibandakanya ka-Priyanka Chopra kwafuneka ukuba ivele kwiTiffany & Co: Nali iNqaku elipheleleyo
Umfazi oneminyaka engama-72 ubudala oye wala Izindululo ezingama-42 zoMtshato
I-Supermodel Christy Turlington kunye no-Ed Burns babhiyozela iminyaka eli-15 yomtshato eSpain
I-Britney Spears kunye ne-Boyfriend Sam Asghari Spark Engagement Rumors kwiRed Carpet
Nantsi indlela yokutshintsha igama lakho eMassachusetts
CAELYNN ukuhambelana namazwi
Uneminyaka emingaphi umfazi ka-donald trump
yeyiphi iringi yomtshato enxitywe
indoda yomqolomba omncinci
Iifoto zedemi-leigh nel-peters
olungileyo umama unyana womdaniso
Iingubo ezincinci zomtshato ezipinki ezingabizi
I-21 engummangaliso woyilo lwasekhaya I-Ideas kunye nokuhombisa (imifanekiso)
U-Italia Ricci utshata noRobbie Amell kumtshato waseLos Angeles
Priyanka Chopra's Bouquet Wedding and Cake Details Revealed